Millennials na Omni-Channel Omume ppingzụ ahịa
Na ekwentị na akpa ọ bụla, Millennials dị njikere ma bụrụ ụzọ ọhụrụ ịzụ ahịa ejirila mara ha. N’inwe ike karịrị ijeri $ 200 n’ịzụ ikike kwa afọ, Millennials bụ otu dị mkpa iji lekọta; mana ego ole ka ndị na-ere ahịa na-atụle ha ka ha na-emelite atụmatụ ahịa ha?
Ọ bụ ezie na Millennials ka na-enwe ọ inụ na-na ụlọ ahịa ịzụrụ, 85% amasị iji ha mobile ngwaọrụ nyocha ngwaahịa tupu ịzụrụ. Ndị na-ere ahịa maara nke a na-eme ka ọnụnọ ha n'ịntanetị sie ike ma jiri nyocha na uru ha. 50% nke Millennials ga-eleta ebe ndị na-ere ahịa mgbe a na-enye ha ego ego 20%, mana 72.7% nke ndị na-ere ahịa anaghị enye Kupọns ekwentị gaa ndị ahịa ha. Ndị na-ere ahịa, ndị na-eweta azụmahịa ha n'ọdịnihu, na-enye Millennials na atụmatụ ha, ga-ahụ ihe ịga nke ọma kachasị na afọ ndị na-abịa. Ulo ahia nyochara ihe karịrị ndị ahịa 1,000 na ndị na-ere ahịa, na-eweta ihe ha chọpụtara na infographic dị n'okpuru.
Tags: Millennialsomni-ọwaretailomume ịzụ ahịa